Indlela yenza Potion lokungabonakali ku "Maynkraft"
Abajikelezayo ukuhlola izwe "Maynkrafta", umdlali ungakwazi uhlangabezana nobunzima ezingeke ingaxazululwa ngokuthi ngezindlela ezivamile. Ngokwesibonelo, izilo engahlula ukuthi ezingeni lamanje umlingisi kukhona usengozini ofayo kuye. Ezimweni ezinjalo, umane kubalulekile ukwazi ukuthi yenza Potion lokungabonakali. Empeleni, le nqubo hhayi kakhulu nzima, kodwa ukuze uthole ezinye izithako kungaba nzima kakhulu.
Yinye kuphela indlela ukudlala "Maynkraft" indlela yenza Potion lokungabonakali. Ucabanga ukuthi alchemical itafula, okuyinto izobanjelwa le nqubo. Kodwa kukhona esinye nkinga: ukudala ke sidinga ezinye izinto, irisidi zazo lihlotshaniswa izingozi ezinkulu.
Indlela elula uzothola ezintathu cobblestone. Ungawathola nje ngokwemvelo, nasemizaneni nezinqaba esishiywe dengwane. Futhi, uma kunesidingo, uyenze eyakho, mane nje ngokuxuba ukusakaza ezimbili - lava namanzi. Kodwa qaphela futhi musa bawe phansi goo red-hot.
Induku Ifrit ezidingekayo ukuze kuphelele ukuma, zikhona izinkinga. Kuyenzeka ngokubulala efreet ezitholakala emhlabeni ephansi, futhi ukwenza kanjalo kuphela siqu sakhe. Uma ukubulala Ifrit isicupho, lutho ngeke fall out.
Esezuze zonke izithako ukuthi ukuya ebhentshini kraft ukupheka yokubeka kuso. Ukuze wenze lokhu, wafaka irowu phansi ezintathu cobblestone, futhi ingqamuzana central - induku. Manje ake sibheke ukuthi sinikeza Minecraft. Indlela yenza Potion lokungabonakali, nokuthi kubalulekile lokhu?
Ngaphambi yenza Potion lokungabonakali, kudingeka ukuqoqa izingxenye ezithile. Ezinye zazo yilezi ezingavamile, abanye hhayi ngakho, kodwa badinga ukwakha Potion ngempumelelo enkulu. Ngakho, yini esiyidingayo?
Flasks ngamanzi. Kungcono ezintathu nje lawo, njengoba ungakwazi yenza Potion kwamakhophi ezintathu, unezela bonke kwelinye isithako.
yayifanekisela nomxhantela Infernal. Ungayithola emhlabeni aphansi e izinqaba tshwala. Nokho, ungakwazi futhi sihlakulele bebodwa, kodwa ukuthi udinga eshaweni isihlabathi.
Carrot Evamile. Ukhula Othandweni imibhede.
Eight bullion igolide. Zishona ujule emihumeni. Ngokuvamile, igolide itholakala endaweni amayunithi 10-15 ukujula. Ukuze yokumba, uzodinga pickaxe yensimbi.
Kulolo ketshezi (okuphekwe) Spider Eye. Ungakwazi knock out nge abathakathi noma ukupheka ngokwakho emehlweni besicabucabu, ushukela kanye amakhowe ensundu.
uthuli Red (mawuthanda).
Uma waqoqa wonke izithako ezidingekayo, encibilikisiwe igolide ore ku nemishayo, kuzomele wenze isanqante segolide. Ngenxa yale njongo ebhentshini kuseli emaphakathi, beka isanqante evamile ezungeze ngegolide.
Konke, manje, ake baqonde indlela yenza Potion lokungabonakali, futhi kulokho oda.
Ngo umfuma ngamanzi, engeza nesihogo sokuhlupha ukugcwala kwamanzi, ukuze uthole Potion anolaka.
Waba yini umphumela wesibindi ngokungeza isanqante segolide. Ngakho, sithola umbono Potion ebusuku.
Nakulokhu futhi, ukusakaza Potion omncane bahlala endaweni yokubeka ukupheka, Roll it okuphekiwe spider amehlo. Uzothola i-Potion lokungabonakali, umphumela lapho ihlala 3 kuphela imizuzu.
Ukuze kwandiswe isikhathi, engeza Potion uthuli yokugcina abomvu.
Yilokho, lokungabonakali yakho Potion usulungile.
Kukhona ezinye imithetho ukusetshenziswa ukuthi Kumelwe ukhumbule ngaphambi yenza Potion lokungabonakali.
Lokungabonakali ayiphelele. Abanye abadlali ungase uphawule I-Bubbles ukuthi ifike iphuzu omi wena.
Izicabucabu bheka ongabonakali.
Uma umuntu iphele. Zonke gear yakho kukwenza ebonakalayo. Awukwazi ukufihla uma ungenawo ahlubule zempi.
Nge Potion ongabonakali izilo ungaboni. Uma ubeka into eyodwa ukuthi uzophawula ngaphakathi endaweni engaba 1 iyunithi. Uma ukugqoka ngokugcwele impi zempi, izilo ukukubona endaweni engaba amayunithi 10 esikhundleni 15 ngaphandle ukubonakala.
Beamng Drive: Izidingo uhlelo
Kungani izimpukane "Varfeys"? Game amaphutha nezisombululo zabo
Ufuna ukudlala "batelfild 4"? Izimfuneko zesistimu afaneleka?
Orcs ( "Warcraft") kanye umlando omfushane abantu babo
Indlela ukushintsha lwemali kule "isisusa": imininingwane nolwazi oluyisisekelo
Izici yomdlalo "World of Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha" kanye nokuxhumana kumephu, "Siegfried Line"
Don zohlobo amahhashi: incazelo kanye nezithombe
Izikhwama Viktoriya Bekhem: real ahlukile Chic
USazan: ukupheka izinhlanzi ngezindlela ezihlukahlukene
In izifo ezithile zesimiso sezinzwa kuzosiza izidakamizwa 'Neuromidin'. Yokusetshenziswa
Amafulethi Safety ngesikhathi samaholidi
Adume Jacques Iv Kusto? Biography, ucwaningo, ezisunguliwe
Biography Stellar: Gosha Kutsenko - omunye abadlali ethandwa kakhulu isikhathi sethu
Amakamelo omshado waseKrov - isibambiso somkhosi omuhle